China China Isitolo esidayisa yonke impahla High Quality Competitive Price Red fresh Apple abakhiqizi nabaphakeli | AGR
Inani lokudla okunomsoco kwama-apula
1, i-apula luhlobo lokudla okuphansi kwekhalori, njalo amagremu ayi-100 akhiqiza ukushisa okungama-kcal angama-60. Izakhi zomzimba ezi-Apple ezikuncibilikayo, okulula ukumuncwa ngumzimba womuntu, owaziwa ngokuthi "amanzi aphilayo" .Kusiza ukuncibilikisa isibabule futhi yenza isikhumba sibushelelezi futhi sithambe.
2, i-apula ine "fruit fruit", "memory fruit" igama lokuncoma.Ukudla ama-apula amaningi kudala kwaziwa ukuthuthukisa inkumbulo nobuhlakani.Ama-apula acebile ngoshukela, amavithamini, amaminerali nezinye izakhi zomzimba ezibalulekile ebuchosheni.
3. Ama-apula acebile nge-zinc. Ngokuya ngocwaningo, i-zinc iyinhlanganisela yama-enzyme amaningi abalulekile emzimbeni womuntu futhi iyinto esemqoka yokukhuthaza ukukhula nentuthuko.
4. Iphunga lama-apula liyikhambi lokucindezeleka nokudangala.Ochwepheshe bathole ngemuva kokuhlolwa okuningi ukuthi, phakathi kwamakha amaningi, iphunga le-apula linomthelela omkhulu ngokwengqondo kubantu, linomphumela osobala ekuqedeni ukudangala kwengqondo. Isicelo sifakazele ukuthi imizwa yeziguli ezinokucindezeleka kwengqondo yathuthuka kakhulu ngemuva kokunuka iphunga le-apula, umoya wakhululeka futhi wajabula, futhi imizwa yokudangala yaqedwa.
5. I-malic acid ema-apula inomphumela omhlophe.Abantu abaningi bakhathazeka ngengozi yokubola kwamazinyo ngenxa ye-asidi yama-apula. Ama-apula aphekwe noshizi anciphisa i-asidi, futhi ukudla ama-apula nakho kungasiza ekuhlanzeni amazinyo akho ngempumelelo.
Uvithamini C ophakathi kwama-apula ukuvikela iziguli ezinesifo senhliziyo ezinesici esinempilo.
Abantu abadle ama-aphula amaningi bebesemathubeni amancane okuthi bangahlaselwa umkhuhlane kunalabo abangawadlanga noma bangaphuthi kangako. Ngenxa yalokho, abanye ososayensi nodokotela babize ama-apula ngokuthi "izithelo ezinomsoco oqondisa omni" noma "abasebenza ngokujwayelekile". kubucayi kakhulu, ukudla ama-apula amaningi kungathuthukisa uhlelo lokuphefumula nokusebenza kwamaphaphu, kuvikele amaphaphu othulini nasemsini emoyeni.
Langaphambilini Thekelisa izithelo ezintsha ezingama-apula ezingama-2020 ngentengo enhle
Olandelayo: Imbewu Yemvelo Enempilo Ephakeme Engokwemvelo Igalikhi Emhlophe Ejwayelekile
Thekelisa izithelo ezintsha eziyi-apple eziyi-2020 nge-goo ...